Baarlamaanka oo dood kulul ka yeeshay sharciga Isgaarsiinta Qaranka – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo dood kulul ka yeeshay sharciga Isgaarsiinta Qaranka
Furitaanka kulanka Baarlamaanka waxaa Xildhibaannada warbixin ka dhageysteen guddoomiyaha guddiga Arrimaha bulshada ee Baarlamaanka Dr Cusmaan Maxamuud Dufle, ayadoo warbixintaasina ay ka hadleysay waci gelinta Waxyeelada cudurka cagaarshowga.
Warbixintaasi kaddib waxaa Xildhibaannadu gudageleen ka doodista sharciga Isgaarsiinta Qaranka kadib markii guddiga Warfaafinta iyo Isgaarsiinta ee Baarlamaanka ay Xildhibaannada usoo celiyeen warbixintooda la xiriirta wax ka bedelkii iyo tallooyinkii lagu soo kordhiyey Sharciga Isgaarsiinta Qaranka, waxaana Mudaneyaasha Baarlamaanku si wadajir ah uga mahad celiyeen guddiga Warfaafinta shaqada adag ee ay soo qabteen waxaana dhinaca kale ay soo jeediyeen tallooyin hor leh oo ay doonayaan in lagu daro sharcigan maraya marxaladihii ugu dambeeyey.
Gunta dooda Xildhibaannada Baarlamaanku waxey quseysay qodobbo dhowr ah oo kala ahaa sameynta hay’adda ama guddiga isgaarsiinta Qaranka, awoodaha guddiga ama hay’adda, in sharcigan laga talagelin shirkadaha isgaarsiinta ee hada jirta oo dalkan maalgelin ku sameeyey, in sidoo kale shirkadaha xubno ku yeeshaan guddiga ama hay’adda iyo in sharcigan lagu cadeeyo xuquuqda shaqaaleysiinta ee ay Haweenka Soomaaliyeed ku yeelanayaan shirkadaha Isgaarsiinta Dalka.
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo shirka guddoominayey ayaa gebagebadii kulanka tilmaamay in dooda Xildhibaannadu ay aad u dheeraatay islamarkaana la dhameystiri doono maalinnimada berrito ah gelinka dambe maadaama ay Xildhibaannadu xaq u wada leeyihiin iney ra’yigooda dhiibtaan.
Dooda Hindise Sharciyeedka Xeerka Isgaarsiinta Qaranka waxaa isku qoray iney ka qeyb qaataan 46 Xildhibaan, kaliya 15 Mudane ayaa fikirkooda dhiibtay, waxaana haray 31 Xildhibaan oo iyagu ra’yigooda dhiiban doona gelinki dambe ee berry, waayo maalinnimada berrito ah waxaa Baarlamaanka hor imaan doonta si ay su’aallo Xildhibaannada uga jawaabto Wasiirka Wasaaradda Waxbarasha iyo Tacliinta Sare.
Dhismaha Maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu heshiiyay